(tonga teto avy amin'ny Jodaisma farisiana)
Ny Fariseo dia ireo Jiosy amin'ny antoko iray tao Jodea nandritra ny vanimpotoan'ny Tempoly Faharoa, izany hoe tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K. sy ny taonjato voalohany taor. J.K. Atao hoe farisaisma na farizianisma ny firehan-kevitra ara-pivavahan'izy ireo. Maro ny fampianaran'ny Fariseo izay tafakambana ao amin'ny lovatsofin'ny Raby. Miavaka ny fampianaran'ny Fariseo noho izy mifototra amin'ny Torah am-bava mba handraiketana ny lalàna jiosy. Ny tena loharano manoritsoritra ny amin'ny Fariseo dia ny boky nosoratan'i Flavio Josefa sy ny Testamenta Vaovao ary ny soratr'ireo Raby.
2.2 Tsy fifanarahany tamin'ireo antoko hafa
2.3 Fiantraikan'ny fisainan'ny Fariseo
2.4 Toeran'ny Fariseo teo amin'ny jodaisma rabinika
Ao amin'ny soratr'i Flavio Josefa no nahitana voalohany ny firesahana ny amin'ny Fariseo raha tantarainy ny nisarahan'i Joany Hirkana tamin'io antoko io ka nikambana tamin'ny Sadoseo. Tamin'io fotoana io ihany koa no nampalaza ny firesahana ny amin'ny Fariseo ao amin'ny Filazantsara.
Ny teny hoe Fariseo dia avy amin'ny teny grika hoe Φαρισαῖος / Pharisaios izay avy amin'ny teny arameana hoe פְּרִישָׁא / Perîshâ (פְּרִישַׁיָּא / Perîshayyâ raha amin'ny endrika milaza maro) izay midika hoe "voasaraka". Io indray dia mifandray amin'ny teny hebreo hoe פָּרוּשׁ / pârûsh (פְּרוּשִׁים / perûshîm raha amin'ny endrika milaza maro). Avy amin'ny matoanteny hebreo hoe פָּרַשׁ / pârash izay midika hoe "manambara" na "manasaraka" na "manazava".
Araka ny lovantsofina rabinika dia taranak'ireo Olonkendry tao amin'ny Sinagoga Lehibe (כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה / Knesset HaGuedolah) ny Fariseo. Efa hatramin'i Simona ilay Marina (angamba ny mpisoronabe Simona II izany) sy i Antigona avy ao Sokho ny fireham-pisainan'ny Fariseo.
Tsy mazava anefa ny tena fiaviany, sahala amin'ny an'ny Sadoseo koa. Nisandratra amin'ny maha antoko azy ny Fariseo taorian'ny fikomian'ny Makabeo sy ny fiakaran'ny taranaka hasmoneana teo amin'ny fitondrana tao Jodea. Ny petra-kevitra sasany dia milaza fa taranaky ny Hasidima ("Tia vavaka") izay nanda tsy nanaraka ny fomba amam-panao grika teo ambany fanapahan'i Antiokosy Epifanesy IV ny Fariseo.
Niantehitra tamin'ny olona amin'ny saranga anelanelany, izay nanana fari-piainana ampy noho ny fandrosoana ara-toekarena, ny Fariseo. Nanampy azy ireo tamin'ny fanaparitahana ny fandalinana ny lalàna tany ivelan'ny toerana mahazatra mifandray amin'ny Tempolin'i Jerosalema izany toe-javatra izany. Izany fandrosoan'ny toekarena izany dia niteraka ny filana ireo mpanoradalana manam-pahaizana momba ny lalàna, nefa tsy vaotery ho mpanoradalàna miankina amin'ny Tempoly izany.
Tsy fifanarahany tamin'ireo antoko hafaHanova
Araka an'i Flavio Josefa dia tamin'ny foto-pinoana no tsy nifanarahan'ny Fariseo tamin'ny Sadoseo sy ny Eseniana, ary koa tamin'ny lafiny fampiharana ny tokony ho fitondran-tena eo amin'ny fiainana andavanandro, izany hoe momba ny halakha. Nisafidy ny hampifanaraka ny fototry ny halakha amin'ny zava-misy ny Fariseo manoloana io fiovana ara-piarahamonina sy ara-toekarena io, mba hahatonga azy ireo tsy hilaozan'ny toetrandro. Nekeny ny fivoarana miandalan'ny fivoasana ny lalàna. Ny lalàna am-bava (Torah am-bava izay atao hoe koa "lovantsofin'ny razana") no iankinany amin'izany. Mampiavaka ny fisainan'ny Fariseo io atao hoe Torah am-bava io izay nivoatra hatramin'ny vanimpotoana persiana.
Nifanohitra ny Eseniana (antoko tao amoron'ny Ranomasina Maty) sy ny Fariseo araka ny soratanam-piraketana iray tao amin'ny Ranomasina Maty, ka ireto ireo zavatra tsy nifanarahana ireo: ny fahadiovana takin'ny fombam-pivavahana, ny firavoravoana, ny fitantanana ny Tempoly ary ny mpisorona. Tsy mitovy ny fahazoan'izy ireo ny Lalàna. Eken'ny Fariseo ny fampifanarahana ny Lalàna amin'ny zava-misy iainana fa ny Eseniana kosa mandray amin'ny fomba hentitra ny Lalàna, ka aleony mifady ny fanao sarotra toy izay ho azon'ny fahalotoana ara-pivavahana.
Fiantraikan'ny fisainan'ny FariseoHanova
Ilay fampifanarahana amin'ny zava-misy nataon'ny Fariseo dia nahatonga azy ireo hanaiky ny fiakaran'ilay Hasmoneana atao hoe Simona eo amin'ny asam-pisoronana, na dia tsy taranak'i Zadoka na Sadoka na Tsadoka (atao hoe Zadokida na Sadokida na Tsadokida) aza izy. Tamin'ny fanapahan'ny Hasmoneana dia nifaninana tamin'ny Sadoseo sy ny antoko hafa ny Fariseo teo amin'ny fitarihana ara-panahy an'i Jodea sy ny vahoaka jiosy. Nankasitrahin'ny maro anisa izay nahitana tantsaha sy tandrenivohitra nafana fo amin'ny vavaka ny antokon'ny Fariseo. Ny Sadoseo kosa dia niaro ny tombontsoan'ny saranganan'ny mpisorona izay nifamatotra hatrizay tamin'ny fahefana ara-politika. Tamin'ny andron'i Joany Hirkana dia nandaitra teo amin'ny vahoaka ny hevitry ny Fariseo sady nanakaiky kokoa ny mpitondra izy ireo. Tsy nankasitraka ny fitiavan'i Hirkana manita-panjakana sy ny faty olona ary ny harena lany naterak'izany anefa izy ireo. Tsy nankasitrahan'ny sasany tamin'izy ireo koa ny fivangongoan'ny fahefana ara-politika sy ara-pivavahana amin'olon-tokana. Noho izany dia nihavery ny toeran'izy ireo tao amin'ny lapan'ny Hasmoneana. Neken'izy ireo ny niakaran'i Heroda I Lehibe teo amin'ny fitondrana na dia Idomeana (Edomita) aza izy, satria afaka niantoka ny fandriam-pahalemana sy ny fahaleovan-tenan'ny fivavahana i Heroda. Ho setrin'izany dia nankasitrahan'ny vahoaka i Heroda noho ny namelany malalaka ny Fariseo.
Lazain'i Flavio Josefa ho mpikatsaka fahefana politika ny Fariseo. Tamin'ny fanapahan'ny mpanjakavavy Salome Aleksandra dia nanara-maso ny fahefana politika izy ireo sady nifehy ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny Tempoly. Tsy misy anefa porofo ahafaha-milaza fa izy ireo no antoko natanjaka indrindra nandritra ny vanimpotoana hasmoneana sy romana.
Toeran'ny Fariseo teo amin'ny jodaisma rabinikaHanova
Tamin'ny fandravan'ny Romana an'i Jerosalema sy ny Tempoly (taona 70 taor. J.K.) dia nandamina ny sisa tamin'ny jodaisma ny Tanaim sady nampisandratra ny jodaisma rabinika. Nanjary nanjaka tao ny fomba fijerin'ny Fariseo, na dia hita tao koa ny hevitr'ireo antoko hafa. Ny fisainan'ny Fariseo no hany afaka nifanaraka amin'ny tsy fisian'ny Tempoly sady nanana rafitra afaka mifanaraka amin'ny toe-javatra vaovao. Ny fitenenana hoe "farisaisma" dia tsy ampiasaina intsony satria nifangaro tamin'ny jodaisma tanaitika izany.
Tsy atao hoe Fariseo anefa ireo Olonkendrin'ny lahatsoratra talmodika. Misy loharanon-tsoratra roa anefa manao ny Tanaima ao amin'ny fianakavian'i Gamliel ho Fariseo, dia ny rabban Gamliel Zokiny, izay resahina ao amin'ny Asan'ny Apostoly (Asa 5.34) sy i Shimon ben Gamliel I, izay resahina ao amin'ny Autobiographie nataon'i Flavio Josefa (toko faha-38).
Ny fariseo sy ny fivavahana kristianaHanova
Maro ireo mpanoratra mihevitra fa maneho ny zava-nisy marina tamin'ny vanimpotoan'i Jesosy ny lahatsoratra ao amin'ny Filazantsara ka milaza fa tandindon'ny fihatsaram-belatsihy sy ny fanarahana fombafomba tafahoatra eo amin'ny sehatry ny fivavahana ny Fariseo sy ny fampianarany (farisaisma). Tandindon'ny fanaovana tsinontsinona ny hafa izay heverina ho ambany toetra ny Fariseo.
Fitsikerana ny FariseoHanova
Nitsikera matetika ny Fariseo i Jesosy, idrindra ny amin'ny fanizingizinan'izy ireo ny lalàn'ny fombam-pivavahana sy ny fanao momba ny fahadiovana. Nanozona ny Fariseo i Jesosy araka ireo Filazantsara ireo, ohatra ao amin'ny Evanjelin'i Matio (Mat. 23.13; 23.16).
Ao amin'ny Evanjelin'i Lioka ilay fanoharana ny amin'ny Fariseo sy ny mpamory hetra (mpiasan'ny fanjakana romana izay tena tsy tian'ny vahoaka jiosy) dia maneho ny fahambonian'ny mpamory hetra, izay niaiky ny maha mpanota azy ka nangataka ny famindram-pon'Andriamanitra, raha miohatra amin'ilay Fariseo izay manadra-tena amin'ny fitandremany ny fitsipika ka mihevi-tena ho ambony noho ny hafa.
Raha ny tena marina dia ny Fariseo mpihatsara velatsihy no tsikerain'i Jesosy (Mat. 6), izany hoe ireo tsy mampisy dikany ny tsy manam-pahaizana sy ny mpanota araka ny fitsarany azy ireo amin'ny lalàny (Lio. 18.9-14), izay manome lanja tafahoatra ny fisehoana ivelany amin'ny fivavahana ka miavonavona eo anatrehan'Andriamanitra, sady mihevitra fa manam-pahefana amin'Andriamanitra amin'ny fanatanterahan'izy ireo ny fanaony (Mat. 20.1-16; Lio. 15).
Tsy mety mihaino ny fampianaran'i Jesosy ny Fariseo (Joa. 8.13; 9.13-40). Voatsikera ny fandraisany ara-bakiteny ny Lalàna sy ny fametrahany fahamarinana aorina amin'ny asan'ny olona ka te hanery an'Andriamanitra hanome valisoa azy ireo.
Fariseo nifandray tamin'i JesosyHanova
Na dia nandà ny fampianaran'i Jesosy aza ny ankamaroan'ny Fariseo dia nisy ihany ireo izay nankasitraka ny hafany ka nandray azy hiara-misakafo aminy (Lio. 7.36; 11.37; 15.1), dia ireo izay niaro azy (Lio. 13.31; Joa. 7.50), ireo izay niaro ny Kristiana (Asa 5.34-42), ary ireo izay nino fa tanteraka ao amin'i Jesosy ny finoana jiosy (Asa. 15.5).
Fariseo tonga KristianaHanova
↑ 3,0 et 3,1 Michael Wise, Martin Abegg et Edward Cook, Les Manuscrits de la mer Morte, Paris, éd. Perrin, 2003, p. 29.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fariseo&oldid=980740"
Dernière modification le 6 Martsa 2020, à 04:27
Voaova farany tamin'ny 6 Martsa 2020 amin'ny 04:27 ity pejy ity.